Puntland Oo Lagu Eedeeyay inay Magangalyo Siineyso Malleyshiyaad Dil ka Gaystay Galmudug |
Puntland Oo Lagu Eedeeyay inay Magangalyo Siineyso Malleyshiyaad Dil ka Gaystay Galmudug
Maamulka Puntland ayaa lagu eedeyay in ay Gabbaad sinayaan Dambiilayal la sheegay in ay dil ka gaysteen Magaalada Caabudwaaq ee Gobolka Galgaduud, waxaana ay u baxsadeen Degmada Saaxo ee Gobolka Mudug, halkaasi oo la sheegay in ay ku dhuumaalaysanayaan.
Ciidan ka socda dowladda federaalka iyo Galmudug ayaa gaaray saaxo si ay gacanta ugu dhigaan dambiilayaasha la sheegay in dilka gaysteen, waxaana dadka degaanka Saaxo iyo waxgaradku ay kusoo war galiyeen Ciidanka in raggii dilka gaystay Saaxo ku sugan yihiin ayna soo gacanta Ciidanka, balse waxaa la sheegay in arrintu is beddashay markii la sheegay in Odayaasha Saaxo uu amar kaga yimid dhanka Punland kaaasi oo ku aaddan in aan la dhiibin dableydii dadka shacabka kusoo dilay Caabuw-waaq.
Mas’uuliyiin ka tirsan Galmudug oo la socday Ciidanka ayaa sheegay in arrintu ay lama filaan ku noqotay, maamulka Puntland na ay jabinayaan heshiis horay loo galay oo ahaa in la oska kaashado soo qabashada dambiilayaasha.
Waxaana ay sheegen Mas’uuliyiintu in maamulka Puntland uu wado Qorshe raggii la baadi goobayay looga bad-baadinayo gacanta Ciidanka Dowladda iyo kuwa Galmudug, taasina ay tahay wax laga xumaado.
Maamulka Galmudug ayaa horay waxaa uu gacanta u galiyay Puntland dad falal kala duwan ka gaystay Puntland, kuwaas ii si dhumaalaysi ah kusoo galay Galmudug, waxaana ugu dambeeyay Nin la sheegay in uu kufsi ka gaystay Gaalkacyo oo Puntland lagu wareejiyay.